Gbasara anyị - Yantai Joyshing Glass Co., Ltd.
Yantai Joyshing Glass Co., Ltd. dị ka a pụrụ iche na-eduga emeputa na soplaya nke dị iche iche na iko ngwaahịa na China, Aims-enye elu onye-nkwụsị iko ngwọta na-ewu, mma, njem, agbachitere, ntụrụndụ & egwuregwu na na. Ọysụ Glass na-amakarị na imepụta iko a na-asọ asọ. Anyị nwere ike rụpụta curved iko mara mma nke ukwuu ọ bụla okirikiri na anyị curved iko-abịa na ma annealed, laminated, n'obi (toughened), na abụọ glazed, ona gị chọrọ. Applicationsdị ngwa maka iko anyị enyo na-agụnye n'ihu ụlọ ahịa gbagọrọ agbagọ, windo gbagọrọ agbagọ, iko balustrades gbagọrọ agbagọ na ebe a na-asa mmiri.
Anyị nwere obi ụtọ maka asọmpi siri ike nke sitere na teknụzụ dị elu na njikwa njikwa mma. Anyị na-mgbe ewepụtara na nnyocha na mmepe nke elu rụpụta usoro na emejuputa iwu ike njikwa site ọ bụla nzọụkwụ na-ekwe nkwa ruru eru ngwaahịa. Dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ na-eduga, JOYSHING nwere ike ịnye ngwaahịa dị iche iche na oke mma na asọmpi asọmpi. Usoro ejiri nweta ihe ọ Joụ Glassụ ihe ọ Glassụ Glassụ dị iche iche na-eme ka iko dị ọcha ruo na nke plasticity, na-enye ntụgharị uche achọrọ na usoro iwe nke iko site na ụgbọelu nke ikuku oyi.
E wezụga elu uzu na nlezianya àgwà akara, JOYSHING si ike ịsọ mpi na-abịa site na ezi na ọrụ ọrụ. JOYSHING si ahụmahụ na ọkachamara otu nwere ike n'ezie na-enye dị mkpa ma dị mkpa nkwado na mgbe-ire ọrụ na-ekwe nkwa na ndị ahịa niile 'chọrọ, n'agbanyeghị nnukwu ma ọ bụ obere, nwere ike-ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma afọ ojuju.
Curved n'obi iko nwere ruo a okpukpu anọ ike na-abawanye tụnyere annealed iko nke otu ọkpụrụkpụ na ọ bụrụ na agbajikwa, na-agbaji n'ime imerime nọmba nke dịtụ obere iberibe nke ọzọ ma ọ bụ obere cubicle udi.
Enwere ike iji iko siri ike (toughened) gbanye ahịrị dị nro na ụlọ. Adabara maka ojiji na shopfronts, balustrades nke mbara ihu ma ọ bụ steepụ, iko curved (toughened) nwekwara ike tinye a pụrụ iche ighikota na ihe ụkpụrụ ụlọ e mere.